N'ihi Dodge Ram1500 - Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd.
TPE AHUIKE AHU
IHE DODGE RAM1500
Ihe TPE dị mma, dị mma
na gburugburu ebe obibi
Enweghị isi na elu okpomọkụ
MATgbọ ala ITLỌ NA-EBU EGO
Nchekwa, ụgbọ ala pụrụ iche
Anti-ileghara na Nchekwa
Ihe mgbochi skid nke ugo na-agbachi mbọ na buckles na ala siri ike dozie ihe mgbochi ụgbọ ala na ụgbọ ala, nke mere na ụgbọ ala ụgbọ ala agaghị amị amị ma kpuchie osooso ma ọ bụ breeki n'okpuru ịkwọ ụgbọala siri ike, na-eme ka ịkwọ ụgbọ ala.
Teknụzụ Nchedo Gburugburu
N'okpuru ultra-elu okpomọkụ ma ọ bụ okpomọkụ-obere okpomọkụ
Ọ gaghị agagharị, ịgbawa ma ọ bụ nrụrụ
Dabara na nsọtụ nke ụgbọ ala mbụ
Unyi na-eguzogide nchebe
Naanị hichaa ya na akwa ma ọ bụ sachaa ya
na mmiri ihicha dị ka nke ọhụrụ.
1 ： 1 originalgbọ ala mbụ dabara
ma enwere ike igbari ya n'oge obula
Anaghị emetụta ụgbọ ala mbụ
Ihe omuma a di nro ma adighi adighi nma
Nnukwu mmepụta CNC igwe na-akpụzi mmepụta, dabara n'ụzọ dabara adaba n'akụkụ niile nke ụgbọ ala ahụ
Non-ileghara na-eyi na-eguzogide patter
Advanced mmepụta technology
Họrọ ihe nchekwa, gburugburu ebe obibi, ihe na-enweghị isi TPE, tinye ọtụtụ iri nde, jiri teknụzụ imepụta kachasị elu - usoro ịkpụzi ọgwụ.
Agaghị alaghachi n'ụdị ya mbụ mgbe apịaji
Àgwà na-adịghị mma adabaghị n'ụgbọala mbụ
Ala dị larịị ma dịkwa mfe ịkwaga
emetụta nchebe ịnya ụgbọ ala
CHANGZHOU DEAO ELỌ ỌR T AKW TKWỌ teknụzụ CO., LTD.
E guzobere ya na 2016. Thelọ ọrụ ahụ dị na ChangZhou, Jiangsu, China. Lọ ọrụ na-emepụta ihe karịrị square mita 20,000. Ọ bụ ọkachamara emeputa nke akpaaka ngwa tụnyere mmepe, mmepụta na ahịa.
Ojiji nke ahụike na nchekwa gburugburu ebe obibi kachasị ọhụrụ na-eme ka ahụike na nchedo gburugburu ebe obibi na ogologo oge nke ngwaahịa a, dị mma ma ghara ịdị na-egbu egbu, enwere ike iji ya ugboro ugboro, yana nchedo gburugburu ebe obibi na-agbaso ụkpụrụ nchekwa gburugburu ebe obibi nke mba Europe na America.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ndị nwere nkà na ụzụ na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, na-eji teknụzụ na-emepụta teknụzụ kachasị elu, nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe 5, igwe ntanye 9 na-arụ ọrụ, na-arụ ọrụ zuru oke arụ ọrụ, arụmọrụ dị elu.
Kemgbe anyị guzobere, anyị esonyela na ngosi dị iche iche na Korea, Dubai, Shanghai Frankfurt, Canton Fair, wdg.
AKW SUKWỌ AKWPPKWỌ AKWPPKWỌ AKW .KWỌ
Ihe karịrị 200 Akwụkwọ asambodo
Behind ụkpụrụ nke ngwaahịa ọ bụla,
Ọ nwere ọdịdị ya patent.
Ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa